Silbano Garcia, II. dia evanjelistra ho an'ny fiangonan'i Kristy ary izy no mpanorina ny Minisiteran'ny aterineto. Tamin'ny volana May 1, 1995 izy dia afaka nampiasa ny Gateway voalohany voalohany ho an'ny fiangonan'i Kristy manerantany fantatra amin'ny anarana hoe Church-of-Christ.org. Ny Tompo dia nampiasa azy tamin'ny fananganana fiangonana dimy, ary nanao ny fanahy 1,526 tao amin'ny vatan'i Jesoa Kristy izy. Andriamanitra irery ihany no mahafantatra ny isan'ireo fanahy izay nanatona an'i Kristy tamin'ny alalan'ny fampianarana Baiboly an-tserasera sy ny fitoriana amin'ny alalan'ny Internet. Ny Rahalahy Garcia dia lasa fantatra amin'ny maha Evanjelista amin'ny Internet sy mpisava lalana eo amin'ny sehatry ny Evanjelisma amin'ny Internet. Izy dia fitaovana hanampy amin'ny fiangonana an-jatony amin'ny fampiasana Internet ho toy ny fiara ho an'ny fampielezana ny Filazantsaran'i Jesoa Kristy.